Dhacdada "La Niña" waxay sii wadi doontaa xaaladaha dhexdhexaadka ah bilowga sanadka 2017 | Saadaasha Shabakadda
Ifafaaleedka "Wiilka iyo gabadha" iyagu waa meerto waxayna u dhaqmaan hadba xaaladaha cimilada. Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO) ayaa ka digay in xaaladaha “La Niña” ee dhexdhexaad ama aad u daciifka ah la filayo inta lagu gudajiro qeybta hore ee sanadka 2017. In kasta oo ay u badan tahay in xaaladdu is beddeli karto laga bilaabo Maajo.
Si loo ogaado ficillada dhacdooyinkan, WMO waxay ku saleysan tahay daraasadda iyo abuuritaanka moodello saadaaliya falalkan. Ka dib markii ay falanqeeyeen iyaga, waxay gaareen go'aan ah suurtagalnimada in xaaladaha deegaanka ay dhexdhexaad noqdaan waa la ilaaliyaa xitaa iyada oo ifafaalaha "La Niña" uu yahay 70-85%.
1 Ifafaalaha "La Niña"
2 Heerkulka Baasifigga
3 Qeybtii labaad ee 2017
Ifafaalaha "La Niña"
Si loo macneeyo macluumadkan, waxaan si kooban u xusuusaneynaa waxa ifafaalaha "La Niña" yahay. Dhacdadani waxay soo baxdaa marka wajiga wanaagsan ee Koonfurta Oscillation-ku gaaro heerar muhiim ah oo soconaya dhowr bilood.
Marka "La Niña" la joogo, cadaadiska heerka badda ayaa hoos u dhacaya gobolka Oceania, oo sababa inuu ku soo kordho badweynta kulaylaha iyo bad-ku-dhaca badda Baasifigga ee ku teedsan xeebta Koonfurta Ameerika iyo Bartamaha Ameerika; taas oo u horseedda kororka farqiga cadaadiska ee u dhexeeya labada daraf ee isleegga Baasifiga. Dabaylaha ganacsigu way sii xoogeystaan, taasoo keeneysa in biyo yaraanta qabow ee ku teedsan dhul-badeedka Baasifig ay ku sii ekaato dusha sare.
Dabaylahaas aan caadiga ahayn waxay ku hayaan saameyn baaxad weyn dusha sare ee badda, waxayna kordhinayaan farqiga u dhexeeya heerka badda ee u dhexeeya labada daraf ee istiraatiijiga Baasifiga. Tan, heerka badda wuxuu ku sii yaraanayaa xeebaha Kolombiya, Ecuador, Peru iyo waqooyiga Chile wuxuuna ku sii kordhayaa Oceania. Natiijada muuqaalka biyaha qabow ee ku teedsan Equator, heerkulka dusha sare ee badda ayaa ka hooseeya celceliska qiimaha cimilada.
Tani waxay ka dhigan tahay caddaynta tooska ah ee jiritaanka dhacdada La Niña. Si kastaba ha noqotee, cilladaha kuleylka ee ugu sarreeya ayaa ka yar kuwii la diiwaan geliyey intii lagu jiray El Niño. Inta lagu jiro dhacdooyinka La Niña, biyaha kulul ee dhulbaraha Baasifigga waxay ku urursan yihiin gobolka ku teedsan Oceania waana ka dhammaaday gobolkan halkaasoo ay ka soo baxaan daruuraha iyo roobka ugu daran.
Intii lagu jiray qeybtii labaad ee sanadka 2016, heerkulka dusha sare ee Badweynta Baasifigga wuxuu ku sugnaa xadka marinka u kala baxa xaaladaha qabow iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Hadda, bilowgii sanadka 2017, heerkulkan iyo qaar ka mid ah bey'adaha si habsami leh ayaa si cad ugu soo laabtay heerar dhexdhexaad ah, markaa saameynta "La Niña" ma dhaceyso. Tilmaamayaashaani waxay khubaro saadaasha hawada ka dhigayaan inay u maleeyaan in xaaladahan ay yihiin wuxuu ahaan doonaa mid xasilloon inta lagu jiro qeybtii hore ee 2017
Farqiga u dhexeeya ku shaqeynta heer kulka adduunka ayaa ah in "El Niño" uu iyaga kiciyo iyo "La Niña" ayaa iyaga ka dhiga inay dhacaan. Intaa waxaa dheer, "La Niña" waxay kordhisaa inta jeer ee duufaanno ka dhaca Badweynta Atlantik.
Qeybtii labaad ee 2017
Sababtoo ah ifafaalooyinkani had iyo jeer ma ahan kuwo xasilloon, moodello ayaa la sameeyaa oo mashruuc ka sameeya isbeddellada ay ku tiirsan yihiin dhacdooyinkan. Saadaashaan ay sameeyeen moodooyinka WMO wixii ka dambeeyay May 2017, XNUMX, waxaa ku jira fursado fara badan. Xaaladaha qabow waxay u badan tahay inay dhacaan, oo la mid ah kuwa ay bixiso "La Niña" laakiin sidoo kale xaalado dhexdhexaad ah illaa laga gaaro sameynta soo socota ee dhacdo "El Niño".
Qeybtii labaad ee 2017, waxay u badan tahay in xaaladaha La Niña ay sii socon doonaan ” fursad 50% ah, waxay muujineysaa ururka, oo ka digaya, si kastaba ha noqotee, suurtagalnimada dhacdo "El Niño" ah oo la sameeyay inta lagu gudajiray seddexdii ama afaraad ee sanadka 2017 "waa mid muhiim ah", oo taagan qiyaastii 35 ama 40%.
Wareegyada "El Niño" caadi ahaan waa 7-dii sanaba mar. Si kastaba ha noqotee, ficil-celinta isbeddelka cimilada, wareegyadaas ayaa si isdaba-joog ah u dhacaya oo aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dhacdada "La Niña" waxay sii wadi doontaa xaaladaha dhexdhexaadka ah bilowga sanadka 2017
Alps wuxuu waayi karaa 70% barafkooda dhamaadka qarniga
Isbedelka Cimilada ayaa leh saameyn ka weyn sidii horey loogu maleyn jiray xayawaanka